बैशाख २७ पछि बैधानिक शासक को हुने ? - Khabar
बैशाख २७ पछि बैधानिक शासक को हुने ?
info khabar ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार १०:१५
नेकपाको दुबै समूहका नेताहरु अदलतप्रति विश्वस्त छैनन्
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २०७८ बैशाख २७ गतेपछि शासनको अधिकार कोसँग रहने छ भनी गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । चुनाव गर्छु भनेकाले बैशाख २७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग शासन गर्ने अधिकार होला तर त्यो भन्दा पछि शासन गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ ? त्यसपछि मुलुकमा अराजकता आउँछ । निर्वाचन हुनेमा आशंका गर्दै पौडेलले उक्त कुरा भनेका हुन् । आशंका मात्र पौडेल गरेका छैनन्, उनले त निर्वाचन नगराउने ठोकुवा नै गरेका छन् ।
यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नुपूर्व देश निर्वाचनमा गइसकेको सन्देश दिएका छन् । हिजो शनिबार बिराटनगरको सभालाई सम्बोधन गर्दै अदालतले अन्यथा फैसला गरे आफूहरु सडक आन्दोलनमा गएर सच्याउन बाध्य पार्ने चेतावनी दिए । ‘कुनै प्रकारको षड्यन्त्र, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत प्रचण्ड–माधव समूहले प्रयोग गरेको शब्दको हो– सेटिङ । ओली समूहका नेताहरुले देशभर नै ‘हाम्रो सबैतिर सेटिङ भइसकेको छ, संसद विघटन सदर हुन्छ, सूर्य चुनाव चिन्ह पनि हाम्रै हुन्छ’ भन्दै हिँडेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका शीर्ष नेताहरुले खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
यसअघि बिराटनगरको सभामा बोलेका ओली समूहका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २३ माघमा तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले विघटनको संवैधानिक अधिकार आफूसँग रहेको दाबी पनि गरे । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु संसदीय प्रणालीमा जायज हो, विश्वमा यही परम्परा छ । उनले भने– त्यसैले सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।
नेकपाका दुबै समूहको सडक प्रदर्शनमा प्रतिश्पर्धा चलिरहेको बेला प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूह अदालतप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । केही दिनअघि प्रचण्ड–माधव समूहले केन्द्रीय सदश्यहरुलाई नागरिकता सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह स्थगित गर्ने सूचनाका आधारमा केन्द्रीय सदश्यहरुलाई रातारात आउन निर्देशन दिएका हुन् ।
हतियार हुनेले शक्ति हत्याउने अबस्था आउँदै
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले भने– त्यसपछि यो राज्यलाई नेत्रविक्रम चन्दहरुले पनि च्यालेञ्ज गर्ने भए, सेनाले पनि च्यालेन्ज गर्ने भए । जोसँग हतियार छ उसैले राज्यलाई च्यालेन्ज गर्ने अबस्था आउन लागेको पौडेको दावी थियो । यो अवस्था आउदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई वेवारिसे अबस्थामा छोड्नु नहुने बताउँदै उनले भने– काँग्रेस देशको वारेस हो । नेपाली काँग्रेस देशको भरोसा हो । हिजो राजा थिए । आजको भरोसा राजनीति दलहरु नै हुन् । त्यसैले मुलुक र जनताको भरोसा कांग्रेस नै हो । धरान उपमहानगरपालिकामा रहेको वीपी पार्कमा वीपी कोइरालाको पूर्णकदको शालिक अनावरण गर्दै काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा भनेका हुन् ।
कांग्रेस सहि बाटोमा सही ढंगले उभिएन भने काँग्रेसलाई भरोसा किन गर्ने ? जनताले भरोसा नै गर्ने ठाँउ पाएनन् भने के हुन्छ ? अब हामीले भन्नुपर्छ मुलुक र जनतालाई भरोसा दिन्छांै । संविधान र लोकतन्त्र जोगाउछांै । नेपाली जनताको ७० वर्ष सम्मको पसिना खेर जान दिदैनौं । चुनाव भयो भने हामी जितौला तर अहिले हामीले तत्कालिन फाइदा हेर्ने कि मुलुकको संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई हेर्ने ?
बिराटनगरको सभा चन्द्रमाबाट देखिने ओलीको दावी
नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा आयोजित सभा ड्रोनले समेत खिच्न नसक्ने बताएका छन् । प्रदेश–१ स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधामन्त्री ओलीले ‘क्यामेरा र ड्रोनहरुले पनि फोटो खिच्न सकिरहेको छैन । आकाशमा चन्द्रमाले मात्रै देखिरहेको छ, यो सभा कत्रो छ भनेर’ भने ।